[Topnews Daawo :-] Rag lagu tuhmay iney ONLF yihiin oo Xamar lagu xiray -Yaa amray ?
Wednesday May 25, 2016 - 08:52:51 in Articles by Super Admin
Waagacusub.net - Afar nin oo u dhashay beesha Ogaadeen loogana shakiyay iney ka tirsan yihiin Jabhadda Gobanima u dirirka Ogadeniya ee ONLF ayaa laga deeyrinayaa xaaladooda Caafimaad kadib markii Ciidanka Nabadsugidda ay ka qabteen Degmadda Hodan ,ag
Waagacusub.net - Afar nin oo u dhashay beesha Ogaadeen loogana shakiyay iney ka tirsan yihiin Jabhadda Gobanima u dirirka Ogadeniya ee ONLF ayaa laga deeyrinayaa xaaladooda Caafimaad kadib markii Ciidanka Nabadsugidda ay ka qabteen Degmadda Hodan ,agagaarka Isgoyska Albaraka 24 December 2015.
Afarta nin oo Muqdisho loo geeyay in lagu daweeyo maadama ay qabaan dhaawacyo iyo xanuuna kala duwan ayaa Baabuur lagala degay kadib markii ay ka baxeen Isbitaalka Madiina oo lagu daweeynaaye mudo.
Dhalinyaradaan u dhashay beesha Ogaadeen ee Caasimadda dalkooda hooyo loogu xiray shaki la xiriira iney u dagaalamayaan xoreynta dhulka Ethiopia ka heeysato Somalia waxaa lagu kala magacaabaa :-
1- Asad Adan Dheere
3- Cabdi Maxamed Xasan
4- Maxamed Sheekh Cabdi
"Nabadsugidda Ethiopia ayaa dhowr bilood heeysatay ,si xun ayaa loo jirdilay oo Caafimaadkooda waa liitaa,waxaana la keenay hadda xabsiga dhexe” ayuu yiri Sarkaal ka tirsan Ciidanka ilaaladda Xabsiga dhexe ee Muqdisho.
Sarkaal kale oo codsaday in magaciisa aan la xigan xaalad amaan darteed ayaa sheegay iney baaris ku sameeyeen afarta Nin ee looga shakiyay iney ONLF yihiin hasse yeeshee hay’ada NISA ku weeysay wax dimbiyo.
"Markii aan sheegnay inaan dimbi lagu heyn wuxuu Madaxweyne Xasan nagu dhahay afarta nin u gudbiya Xabsiga dhexe maxaa yeelay Safaaradda Ethiopia ee Muqdisho ayaa sidaas amartay Madaxweynaha” ayuu yiri Sarkaalka NISA ee Waagacusub u waramay.
Intaan Xabsiga dhexe loo gudbin waxaa afarta nin lagu haayey dhisma qarsoodiya oo Sirdoonka Ethiopia ku leeyihiin gudaha Muqdisho,waxaana lagu sameeyay jirdil ,sida uu sheegay Masuul ka tirsan Wasaaradda Amniga Qaranka Somalia.
Waa arrin fool xun oo dadnimadda ka fog in Muwaadiniin Soomaaliyeed loo cadaabo waxaad ka tirsan tihiin geesiyiin gobanimadoona oo doonaya iney dhulkooda ka xoreeystaan Cadawga Wayaanaha ama Xabashidda.
Sikastaba ha ahaatee, Taariikhda ayaa lagu qori doonaa in Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud amray in dad Somalia lagu jirdilo Caasimadda Muqdisho ,iyadoo falkaasina uu yahay mid lagu raaligelinaa Xabashidda.
Lacago lagu lunsaday Wasaarada Shaqada oo Musuq Maasuq hareeyay
Wasaaracda shaqada ee dowlada federaalka ayaa noqotay meel uu hareeyay musuq maasuq ba'an. Tan iyo markii uu yimid Wasiir Saalax Axmed Jaamac ayaa waxaa soo wajahay wasaarada jahawareer dhaqaale iyo xatooyo lacageed. Full Article
Wardegdega Daawo Farmaajo iyo Afhayeenka Al-Shabaab oo kullan qarsoodiya ku yeeshay Villa Somalia
Saraakiil ka tirsan Sirdoonka Madaxtooyadda Somalia ayaa Waagacusub u xaqiijiyay inuu xalay kulan qarsoodiya dhexmaray Madaxweyne Farmaajo iyo Afhayeenka Al-Shabaab. Full Article
[Topnews:-] Dowladda Somalia oo ku guuldareeysatay Mashruucii Mareykanka ee Malaayiinta dollar kadib markii Puntland diiday ?
DAWLADDA FARMAAJO OO KAMID NOQOTAY MAAMUL GOBOLEEDYADA. SHAQADA XILDHIBAANADA IYO SENATORS -KANA MEEL UGA DHACDAY! Waagacusub.net - Shirkii Qeybsiga Kaluunka Tunada Badweynta Hindiya oo u dhaxeeyey wasiiradda Kaluumeysiga Maamul Goboleedyada iyo dowladda Dhexe oo Guuldarro ku soo dhamaaday! Full Article
Daawo SirCulus Jeneral Isaaqa oo lagu helay inuu Al-Shabaab yahay ?
Waagacusub.net - Ciidanka Nabadsugidda iyo Sirdoonka Gobolka Banaadir ayaa maanta ku guuleeystay inuu toogasho ku dilo laba Sarkaal oo Al-Shabaab ka tirsan xilli ay qorsheeynayeen iney hoobiyeyaal ku garaacaan Garoonka Muqdisho iyo Xarunta Xalane,sida ay xaqiijiyeen Saraakiisha NISA. Full Article